#ခြံဝန်းကျယ်ကျယ်လေးနဲ့အိမ်အပါလေးရှာနေသူများအတွက်ပါ။ #မရမ်းကုန်းကပြည်လမ်းသွယ်ရှိ #မဆိုးရိမ်လမ်းကအိမ်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ #ဈေးနှုန်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ...? ❎ယခင်ဈေး=7000L🙅 ✅ယခုဈေး =5500L✅ 👉ဘာတွေနီးမလဲ....? Ok ကြည့်လိုက်ရအောင် (1)လေဆိပ်နီး(2)ကျောင်းနီး(3)Ocean Shopping (4)ဝိတိုရီယ ဆေးရုံ စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခြံအကျယ်....(60'×90') အိမ္ပုံစံ..2RC ဖွဲ့စည်းပုံ ...2MBR +3BR #အားသာချက်တွေက ...ကိုယ်တိုင်နေမယ်စိတ်ကူးနဲ့သေချာဆောက်လုပ်ထားပြီး၊လမ်းနှစ်ဖက်ပေါက်မို့ ကြိုက်တဲ့လမ်းဘက်ကလည်း အသွားအလာလုပ်လို့ရပါတယ်။ #လူကြီးမင်းတို့အတွက် ကိုယ်တိုင်နေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ #ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်စေ!ပြန်ငှားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်! #မှန်ကန်သောပိုင်ဆိုင်မှု ၊သေချာသောဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ဖို့သင့်သောနေရာလေးမို့ #လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော်.❤️❤️ #ယခုကြော်ငြာထားသောဈေးနှုန်းများအား ရောင်းချသောပိုင်ရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ #စိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်ချင်ရင်ပဲဖြစ်‌စေ၊ပိုင်ရှင်များနှင့်တွေဆုံညှိနှိုင်းချင်ရင်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ 09 799017250